जाडोमा पानी पिउन मन लाग्दैन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
Mon, Feb 24, 2020 at 8:34pm
नेपाली क्रिकेट टोली बिहीबार थाइल्याण्ड जाँदै #आहा खबर# वामदेव प्रकरणले नेकपा नै विभाजित हुनसक्ने चेतावनी #आहा खबर# बाबुरामको चेतावनीः राजतन्त्र गयो, ओलीतन्त्र पनि जान्छ #आहा खबर# भौतिकमन्त्री नेम्वाङले सम्हाले सहरी विकास मन्त्रीको पदभार #आहा खबर# हङकङमा कोरोनाभाइरसका कारण ५७ हजार बेरोजगार बने #आहा खबर# सानेपा हत्याकाण्डको निष्कर्ष: जबर्जस्ती प्रयास भएको छैन, हत्याको कारण भने खुलेन #आहा खबर# विक्की कौशलको भूत हेर्दा कति डर लाग्छ ? #आहा खबर# मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना #आहा खबर# बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्नेक्रम बढ्दै #आहा खबर# ग्याल्पो ल्होसार पर्व मनाउँदै शेर्पा समुदाय #आहा खबर# उपकरण थप्दै भरतपुर अस्पताल: सिटीस्क्यान मर्मत गर्न बल्ल बोलपत्र #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी #आहा खबर# '७० करोड घुस प्रकरणमा बास्कोटा र ओली बराबरी दोषी’ #आहा खबर# हजार्ड फेरी घाइते, बाँकी सिजननै खेल्न नसक्ने आशंका #आहा खबर# शिल्पा शेट्टी बनिन् छोरीकी आमा #आहा खबर#
सोमबार, ६ माघ २०७६,	आहाखबर
जाडोको मौसममा पनि मानिसलाई विभिन्न रोगले संक्रमण गर्न सक्छ । जाडोयाममा बिहान बेलुका वायुमण्डलको तल्लो तहमा ब्याक्टेरिया, भाइरसलगायत जीवाणु बढी क्रियाशिल हुन्छन् । साथै धूलोका कण पनि वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुन्छ ।
यस्तो बेला माक्स नलगाई घरबाट निस्किए श्वासप्रश्वास, छाला, कोल्ड डाइरिया, खोकी जस्ता रोगले सताउछ । यो मौसमले बिशेषगरि बालबालिकालाई अझै बढी समस्या पार्छ । भाइरसले बालबालिकालाई चाडै आक्रमण गर्ने हुँदा वयस्कको तुलनामा उनीहरू चाडै बिरामी पर्छन । उनीहरूलाई श्वासप्रश्वास, खोकी र डायरिया जस्ता समस्या यो बेला बढी देखापर्छ ।
गर्मीमा जास्तो जाडोमा शरीरबाट पसिना नआउने हुँदा मानिसलाई तिर्खा कम लाग्छ । तिर्खा लागेन भनेर पानी नै नखाने प्रवृति छ । खाइहाले पनि थोरै मात्रामा खाने गर्छन् । जसले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ । शरीरमा पानीको अभावले छाला फुस्रो हुने, कब्जियत हुने, ओठ फुट्ने समस्या देखिन्छ । यसकारण तिर्खा नलागे पनि प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
कतिपय किशोरकिशोरी फेसनेवल बन्ने होडमा पातला र कम कपडा लगाउने गर्छन । जसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । पातला र कम कपडा लगाउदा चिसोले रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनिया जस्ता समस्याले हुनसक्छ । जाडो महिना सकिने र गर्मी महिना सुरु बेलामा पनि बिशेष सचेतता हुनुपर्छ ।
यो बेलामा पनि सरुवा रोगका किटाणु सक्रिय हुन्छन् । जसले सहजै मानिसलाई आक्रमण गर्छ । सरुवा रोगहरू सिजन अनुसार फरक फरक देखा पर्छ । जुनसुकै रोग जतिबेला पनि लाग्ने हुँदा सर्तकता अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
चीनबाट नेपाल फर्काइएका १ सय ७५ जनालाई खरिपाटी पुर्‍याइयाे
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १४ सय नाघ्याे, ६५ हजार बढी संक्रमित
शंकास्पद ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको पुष्टि !
कोरोना भाइरसको आधिकारिक नाम ‘कोभिड–१९’ घोषणा
रुघाखोकी-ज्वरो जाँच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली सिन्धुपाल्चोक प्रस्थान
कोरोना भाइरसको खोप बन्न डेढ वर्ष लाग्ने
उहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई फागुन ३ गते ल्याइने
कोरोना भाइरसबाट एक दनिमै १७ जनाको मृत्यु
चीनबाट स्वदेश ल्याउने तयारी भइरहेका नागरिकको निगरानीमा ६० स्वास्थ्यकर्मी खटाइने
कोरोना प्रभावित देशलाई अमेरिकाले १० करोड डलर दिने
‘सिजनल फ्लु’बाट बाजुरामा पूरै गाउँ संक्रमणमा, दुईको ज्यान गयो
पूरा भयाे चीनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी
चीनबाट नेपाल ल्याइने विद्यार्थीलाई १५ दिनसम्म अलग्गै राखिने
सभापति देउवाद्वारा कोरोना सङ्क्रमणबाट सतर्कताका लागि अपिल
टन्सिलले सतायो ? छिटै निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
कोरोनाभाइरस : डब्ल्यूएचओद्वारा आपतकालको घोषणा
कोरोना भाइरस प्रकोप : अब स्थलमार्ग प्रयोग गर्नेमाथि निगरानी
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण : ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’
कोरोना भाइरसबाट ४ हजार संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ६ पुग्यो
आजदेखि नेपालमै हुने कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने?
नेपालमा थप २ जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण, परीक्षणका लागि ‘स्याम्पल’ हङकङ पठाइयो
अस्ट्रेलियामा पनि ‘कोरोना भाइरस’, अस्ट्रेलियाका नेपाली चिकित्सकले दिए यसबाट बच्ने उपाय
चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट डाक्टरकै मृत्यु
चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मर्नेको संख्या ४१ पुग्यो
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भेटियो
ट्रमा सेन्टरः घाइते अस्पतालमा आउनासाथ उपचार
कुष्ठरोगका वर्षेनी तीन हजार नयाँ बिरामी थपिँदै
यस्ताे रहनेछ अबकाे तीन दिनको मौसम
बाबुरामको चेतावनीः राजतन्त्र गयो, ओलीतन्त्र पनि जान्छ
भौतिकमन्त्री नेम्वाङले सम्हाले सहरी विकास मन्त्रीको पदभार
हङकङमा कोरोनाभाइरसका कारण ५७ हजार बेरोजगार बने